အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: April 2012
ယောက်ျားတွေဟာ တခါတလေကျရင် သူတို့ခေါင်းမာတာကို သက်သေပြဖို့အတွက် မိန်းကလေးတယောက်ကို ချစ်ရေးဆိုတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကောင်လေးတယောက်က ကောင်မလေးကို အဲ့လောက် ကြိုက်တာလဲ မဟုတ်ဘူး၊ တကယ် နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်သလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ဘူး။ အင်း ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ကောင်မလေးကိုပဲ သူ့သူငယ်ချင်း တယောက်ယောက်က သို့မဟုတ် တခြား ကောင်လေး တယောက်ယောက်က လိုက်နေတယ် ချစ်ရေးဆိုဖို့ ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင် သူဟာ အဲ့ဒီကောင်မလေးကို သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ သို့မဟုတ် အဲ့ဒီ နောက် ယောက်ျား တယောက်ယောက် နဲ့ အပြိုင်လိုက်တတ်ပါတယ်။
ယောက်ျားတွေမှာ ဒရာမာ မရှိပါဘူး။ ဇာတ်လမ်း မရှုပ်ပါဘူး၊ ကစားကွက် ပရိယာယ် မရှိပါဘူး။ သူတုို့မှာ ရှိတာ ပြိုင်ပွဲပဲ။ ဘယ်လို ကစားနည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ အတွက်တော့ ပြိုင်ပွဲပဲ။ ချက်စ်ထိုးတာပြောမလား၊ ဘောလုံး ကစားတာပြောမလား၊ အို ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကွန်ပျူတာ ဂိမ်း ဆော့တာတောင် သူတို့အတွက်က ပြိုင်ပွဲပဲ။ အခုပြောနေတဲ့ အရာအကုန်လုံးဟာ သူတို့တွေအတွက်တော့ ပြိုင်ပွဲတွေချည်းပဲ။ ယောက်ျားတယောက်နဲ့ တယောက် ပြိုင်တာ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပြန်ပြိုင်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေပဲ။
မိန်းကလေးတွေကို လိုက်တဲ့ နေရာမှာလဲ ပြိုင်တာပဲ။
ပြိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သူတို့ အတွက် ဖြတ်သန်းမှု က အဓိက မကျဘူး။ အနိုင်အရှုံး ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကသာ ပဓာန။ အဲ့လို အောင်နိုင်မှု ကိုရဖို့အတွက် သူတို့တွေက တခါတခါ သူတို့ ချစ်မိတာက အဲ့ဒီဖြတ်သန်းမှု လို့ ထင်ယောင်မှား တတ်ကြတယ်။ အခုနက အပေါ်မှာ ပေးထဲ့တဲ့ ဥပမာလိုပဲ ကောင်မလေးကို တကယ်တော့မချစ်ဘူး သူငယ်ချင်းက
ချစ်တယ် ကြိုက်တယ် ဆိုတော့မှ ကိုယ်ကလဲ ချစ်တယ် ကြိုက်တယ် ထင်ပြီး အပြိုင်လိုက်ကြိုက်တာ လိုက်တာ ချစ်ရေးလိုက်ဆိုတာ ကောင်မလေး အချစ်ကို လိုချင်တာ။
ဥပမာ နောက်တခု အစက အဲ့ကောင်မလေးကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖိတ်ဖို့ မရည်ရွယ်ဘူး။ သို့သော် နောက် ယောက်ျား တယောက်က ကောင်မလေးကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ချိန်းတာ သိတဲ့ အခါ သူကလဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ချိန်းချင်လာရော။
သူ့ မှာ တခြားကိစ္စ ရှိလို့ ကောင်မလေးကို အိမ်ပြန်လိုက်မပို့နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ သူငယ်ချင်း/ပြိုင်ဘက်က လိုက်ပို့မယ်လဲ ဆိုရော ချက်ချင်း သူပါ လိုက်ပို့ပါမယ် ဖြစ်ရော။
တခြားယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ ပြိုင်ပြီးတော့ ကောင်မလေးရဲ့ အထင်ကြီးမှု ဂရုစိုက်မှု အလေးပေးမှု တွေကို လိုချင်တဲ့ အတွက် အဲ့လို အချိန်မျိုးမှာ ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ တောင် အချို့ အမူအကျင့်တွေ ပုံစံတွေ ကို ပြင်ဆင်ပစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ တဖြည်းဖြည်း သူတို့ ဟာ သူတို့ တကယ်ချစ်နေတာ။ တခြား တယောက်နဲ့ ပြိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူး လို့ ထင်ယောင် မြင်မှားလာတတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့ဟာ ချစ်တတ်လာတယ်။ ကြိုးစားတတ်လာတယ်။ မနာလို ဖြစ်တတ်လာတယ်။ သဝန်တိုတတ်လာတယ်။
တကယ်လို့ ပြိုင်ပွဲမှာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရှုံးသွားခဲ့ရင်လဲ သူတို့ဟာအရှုံးဆိုတာ ကို အသည်းကွဲခြင်း လို့ လှပတဲ့ ပုံစံ တမျိုးနဲ့ အစားထိုး ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ အနိုင်ရသွားခဲ့ရင်တော့ သူတို့ဟာ ပြိုင်ပွဲတပွဲရဲ့ အောင်နိုင် သူဖြစ်ရုံ ပါပဲလား၊ ကောင်မလေးကို တကယ်ချစ်တာ မဟုတ်ဘဲ ပြိုင်ဘက်ကောင်လေးကို အနိုင်လိုချင်မှု သက်သက်ပါပဲလားလို့ အသိတရား ရတတ်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာတဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ဟာ တကယ်တော့ အဲ့အချိန်က အနိုင်ရခဲ့ပေ မယ့် သူတို့ ရဲ့ ခေါင်းမာမှု ကြောင့် သူတကယ် နှစ်နှစ်ကာကာ မချစ်တဲ့ မိန်းမတယောက်ကို ရခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ မိန်းကလေးကတော့ သူ့အပေါ်မှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နှစ်နှစ်ကာကာ နဲ့ တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါ။
Posted by တီချမ်း at 3:45 PM3comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 4:21 PM5comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 11:50 PM No comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 4:00 PM6comments: Links to this post
တကယ်ပြောတာ သူတယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင် အလုပ်က စရှုပ်လာတော့တာပဲ။ တနေ့တနေ့ ပိုပိုလာတဲ့ အလုပ်တွေ အရင်ကနေ့ရက်တွေထက် များများလာတယ်။ ကိုယ့်နေ့ရက်တွေမရိုးရှင်းတော့ဘူးလေ။
အရင်တုံးကဆိုရင် ဂျာနယ် တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေဘတ်လို့ရှိရင် ဗေဒင်ကို ကိုယ့်တယောက်ထဲအတွက်ပဲကြည့်ရတယ်။ ခုတော့ သူ့အတွက် ပါထည့်ကြည့်ရပြီလေ။ အရင်က နက္ခတွေကြည့်ရင် ကိုယ့် စကောပီယို တခု အတွက်ပဲ ခုတော့ သူ့နက္ခပါထည့်ကြည့်ရတယ်။ အရင် ရည်စားဟောင်းတယောက်ကတော့ ငယ်နာမည်လေး ခတ်မေ့မေ့ဆိုတာ ထက် ဘယ်နေ့မွေးလဲ မသိတော့တာပါ။ နက္ခ ဆိုတာ ဝေလာဝေးပဲပေါ့။
အရင်က ဖုန်းကဒ် ကို ဘယ်ကုပ္မဏီက ဈေးအသက်သာဆုံးလဲ ရွေးဝယ်တယ်။ ဘယ်ပက်ဂေ့ဂ်ျ က အကောင်းဆုံး လဲ အပေါဆုံးလဲအသက်သာဆုံးလဲ ကြည့်တယ်။ ပေါလေကောင်းလေ ဈေးပေါပြီး ဖန်ရှင်းများလေ ကြိုက်လေ။ ခုတော့ အဲ့လို လုံးဝမဟုတ်။ ဈေးကြီးမကြီးက အဓိက မဟုတ်တော့ဘူး။ အခု စိတ်ပူတာက လိုင်းမိမမိ၊ တကယ်လို့ လိုင်းမကောင်းတာ ဝယ်မိရင် ရွေးမိရင် တဘက်က သူဘာပြောလဲ ဆိုတာ သေချာမကြားရမှာ စိတ်ပူတတ်ပြီ။ အဲ့တော့ ဈေးကြီးကြီးမကြီးကြီး လိုင်းမိဖို့ အဓိက လိုင်းကြည်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ကဲ လူတယောက်ကို ချစ်မိတာနဲ့ ကိုယ့် သုံးနေကျ ဖုန်းလိုင်းကိုတောင် ပြောင်းရမယ်ဆို စဉ်းစားသာကြည့်တော့ အလုပ်မရှုပ်လား?
လူတယောက်ကို ချစ်မိရင် ဂျာနယ်တွေ စာတွေလဲ ပိုဘတ်ရတော့မယ်။ ဥပမာ ဆိုပါတော့ ကုိုယ်က အိမ်တွင်း အလှဆင်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့စိတ်ကို မဝင်စား၊ ဘောလုံး ဆိုတာ ဘာလို့ လုံးနေမှန်းမသိ၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ မီးလာ တာလောက်ပဲ သိတဲ့ သူ သို့သော် ကိုယ်ချစ်မိသော သူက အဲ့တာတွေမှာ လျှာရှည်တတ်သူဆိုပါတော့ ကိုယ့်မှာ သူနဲ့ စကားပြောစရာ ရှိပါမှအရေး ရှာရဖွေရ ဘတ်ရ ရှုရတော့ပေမယ်။ လျှာရှည်လေ တွေ့ရှိလေ ထုံး နှလုံးမူရပေ
ယောက်ျား မိန်းမ ချစ်ကြ ကြိုက်ကြတယ်ဆိုမှတော့ ချိန်းတာ ပြုတာ ရှိမယ် လည်တာ ပတ်တာ ရှိမယ် အိပ်တာ ပြုတာ ဘာညာ (ဆင်ဆာ) ရှိမယ်။ ချစ်သူရယ်လို့ ရှိလာပြီဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ပိုသတိထားရမယ့် အရာတွေ ပိုလာပြန်ပြီ။ ဥပမာ ဘယ် ရက်စတောရင့်ကတော့ဖြင့် ပိုရိုမန်တစ်တယ်၊ ဘယ်ကတော့ အရသာပိုရှိတယ်၊ ဘယ်ကတော့ ပိုမှောင်တယ် ဂွင်ပိုကောင်းတယ် စသဖြင့် သူနဲ့ တူတူသွားဖို့ ရာထားရတော့မယ်။ ရီဆတ်ခ်ျတွေ လုပ်ရတော့မယ်။ မှတ်သားထားရတော့မယ်။ အဲ့တာမှ နောက်သူနဲ့ တူတူသွားဖို့ ခွင့်ကြုံလာရင် ကိုယ်က သိနေမှာ။ ဟော မိန်းကလေး သဘာဝ အထာကျရအောင်ကလဲ ကိုယ်က မသိချင်ယောင်ဆောင် ရတဲ့ အခါလဲ ရှိလာအုံးမှာ။ ကဲ လူတယောက်ကို ချစ်ရတာ ဘယ်လောက် အလုပ်ရှုပ်လိုက်သလဲလို့နော်။
လူတယောက် ကို ချစ်မိရင် ကိုယ်က အချိန်ယူပြီးတော့ ဝိတ်ချရမယ်၊ အဝတ်အစားအသစ်တွေလန်းလာလေးတွေ ဝယ်ရမယ်၊ မိန်းကလေးတွေဆိုလဲ အလှပြင်ပစ္စည်း အသစ်တွေစမ်းသုံးရမယ်၊ စကင်းကဲတွေ ဂရုပြုရမယ်။
ကဲ အခုပြောသွားတာတွေက အလုပ်တကယ်ရှုပ်တဲ့ စီမရောက်သေးဘူးနော်။ တကယ်ရှုပ်ရတဲ့ အလုပ်က ခုမှလာမှာ။
အထက်မှာ ပြောသွားတာတွေအားလုံးထက်ပို ရှုပ်စေတဲ့ အလုပ်တခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့တာကတော့ ပြန်ပြောင်း အောင်းမေ့ တမ်းတ သတိရ နေရတာပါပဲ။ ဘာကုိုလဲ ဟုတ်လား?။ အရင်တခါကတော့
သူနဲ့ နှမ်းတုံးက ဘယ်လို၊ ဟိုရုပ်ရှင်ကားသွားကြည့်တော့ သူကိုယ့်ကို ဖက်ထားတာ သူ့ကိုယ်ငွေ့လေးက ဘယ်လို၊ သူ့ အသက်ရှုလိုက်ရင် သူ့ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်လေးက ဘယ်လို မြင့်တက်သွားတာ၊ နောက် သူကိုယ့်ကို ပြောဖူး တဲ့ ရင်ခုန်စရာ စကားအခွန်းတိုင်း၊ ကိုယ့်ကို အသက်ရှုမှားစေလောက်တဲ့ ဟိုတခေါက်က အနမ်းလေး၊ ကိုယ့်ကို ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်စေတဲ့ သူ့ရဲ့ရီဝေဝေ အကြည့်လေးတွေ စသဖြင့်ပေါ့။ ကဲ လူတယောက်ကို ချစ်ရတာ အလုပ်မရှုပ်လား။ နောက်ပြီး လူတယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်တို့တွေရဲ့ ပုဂ္ဂလ အချိန်တော်တော်များများ ကို အရင်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေ နောက်တွေ့ရင်ဖြစ်မယ့် ဟာတွေနဲ့ တွေးတွေးပြီး မိန်းမော နေရတာနဲ့ ကုန်ပစ်နေရတယ် ဆိုတာ မမှန်လားဟင်။
တီချမ်းပြောတာ မမှန်ဘူးလို့ ကြိုက်သလောက် ငြင်းပါလေ။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ ကိုယ်သိမပေါ့။
Posted by တီချမ်း at 9:31 AM5comments: Links to this post
By Addy Chen in ဂျူး - Ju Fans · Edit Doc · Delete
လောလောဆယ် ကျတော့မှာ ရှိတဲ့ ဆရာမ စာအုပ်တွေကို စာရင်းလုပ်ထားတာ တင်လိုက်တယ် မသိလိုက်တာ မရှိလိုက်တာ မရှိရလေအောင် ဖြည့်ပေးကြပါအုံး နောက် မအမမက ကအကြံပေးတာက စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့ နှစ်အလိုက်တင်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်တဲ့ ကျတော့မှာ အဲ့တာတော့ မရှိဘူး ဝယ်ထားတဲ့ တချို့စာအုပ်တွေက ပြန်ထုတ်တာတွေဆိုတော့။ နောက်ပြီးတော့ ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ်တွေထဲမှာ မပါသေးတဲ့ ဝတ္ထုတို စာရင်းရှိသေးတယ် သန်းခေါင်ယံနာရီစက်များ၊ သတ္တမမြောက်ငါး စတာတွေ အဲ့တာတွေ လစ်သပ်သပ်လုပ်မယ်
2. ဆရာဝန်တယောက်၏ မှတ်စုများ
3. အရောင်များနှင့် ကစားခြင်း
4. အချစ်ဆိုတာ ကြိုးနဲ့ သီဖို့ မလိုတဲ့ ပန်းတွေ
5. ကျမချစ်သော ယောက်ျားများ
6. ကောင်းကင်မပါတဲ့ ည
7. ရာဇဝင်ထဲမှာ မောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့
8. ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ
ကျမ ၏ သစ်ပင်
ချစ်သူရေးတဲ့ ကျမရဲ့ ညတွေ
ကြယ်ကြွေတို့ ရဲ့ အတောင်ပံ
· May 16, 2011 at 6:54am
Aye Myat Myat Ko တခု ထပ်တွေ့ပြန်ပြီ။ ကျွန်မ၏ပုံရိပ် မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မကို ပြန်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အရိပ်။
March 24, 2011 at 9:41am ·
Addy Chen အင်း
March 24, 2011 at 9:43am ·
Addy Chen ခပ်ဆင်ဆင်ပဲလို့ အဲ့စာအုပ် က မကြိုက်တဲ့ အထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက
Aye Myat Myat Ko မှတ်မိသလောက် ပြန်စဉ်ကြည့်မယ်။ ခုနှစ်တွေကတော့ မသိတော့ဘူး။ သိတဲ့လူဖြည့်။ ရှေ့နောက်ပဲ စဉ်မယ်။ လွဲနေရင် ပြင်ပါ။
March 24, 2011 at 9:45am ·
Addy Chen အမ အဲ့တာဆို စာအုပ် အမျိုးအစားလိုက် အခု စီထားတာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ကျတော် က အခု ကတ် အလိုက် စီထားတာလေ ဥပမာ ဆောင်းပါး ဝတ္ထုတို စသဖြင့်
March 24, 2011 at 9:49am ·
Aye Myat Myat Ko ဟုတ်ဘူး လုံးချင်းကိုပဲ အဲလို အစဉ်လိုက်လေး ဖြစ်ချင်နေတာ။
March 24, 2011 at 9:50am ·
Aye Myat Myat Ko ဒါမဲ့ သေချာပြန်စဉ်ကြည့်မှ ကိုယ်လည်း သေချာ မသိမှန်း သိတော့တယ်။ =D
ဘာလို့ဆို ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ရတာ အစဉ်တိုင်းမှ မဟုတ်တာ။ ကြုံသလို ဖတ်ခဲ့ရတာလေ။ ဒါပေမဲ့ ယေဘုယျပေါ့။
March 24, 2011 at 9:51am ·
Addy Chen အင်းလေ ကြည့်လုပ်ကြတာပေါ့
မောင်ဥာဏ်သာတို့ ကလေးတွေကတော့ ပိုလက်လှမ်းမှီမလားပဲ
March 24, 2011 at 9:52am ·
March 24, 2011 at 10:03am ·
Aye Myat Myat Ko ‎17) ကြယ်ကြွေတို့ ရဲ့ အတောင်ပံ *
March 24, 2011 at 10:17am ·
Addy Chen ပြင်လိုက်ပီနော်
March 24, 2011 at 10:35am ·
Addy Chen ဒီနေ့ တခြားလူတွေဘယ်ရောက်နေကြလဲ
Nyanthar Zaw တခြားသူတွေ တခြားရောက်နေတာ နေမှာပေါ့ဗျ :P
March 26, 2011 at 7:56pm ·
Addy Chen ဟင် ဘယ်သူမှလဲ ဘာမှ လာမပြင်ပေးကြ မအက်ဒစ်ပေးကြပါလား
March 28, 2011 at 10:54am ·
Aye Myat Myat Ko ပြင်ရအောင်က မြန်မာပြည်ကလူကမှ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်းဖတ်ပြီး ပြင်နိုင်မှာ။ ကွန်နက်ရှင်က သိတဲ့အတိုင်း။
March 28, 2011 at 10:57am ·
Addy Chen အင်းပါ ကွန်နက်ရှင်ကိုနားလည်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် အက်တစ်မဖြစ်ကြဘူးလားလို့ အမှန်ဆို အက်မင်တွေလဲ တခုခု လုပ်သင့်တယ်
March 28, 2011 at 10:59am ·
Aye Myat Myat Ko သူ ပျင်းနေတိုင်း
Addy Chen အားလဲအားနေတယ်
March 28, 2011 at 11:00am ·
Nyanthar Zaw ပြင်ပေးရမလား ပြင်ပေးမယ်
March 28, 2011 at 11:47pm ·
Nyanthar Zaw ‎# သန်းခေါင်ယံနာရီစက်များ
# မရနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှု တွေက ဘယ်ထဲကလဲဗျ
March 28, 2011 at 11:54pm ·
Nyanthar Zaw ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကို နောက်နေ့ ရိုက်တင်ပေးမယ် တိုက်ကြည့်လိုက်ကြပေါ့နော် :P
March 28, 2011 at 11:56pm ·
Posted by တီချမ်း at 12:20 PM2comments: Links to this post